musha EUROPEAN FOOTBALL STORies Vatambi vechiGerman Vanotamba Timo Werner Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
Yedu Biography yaTimo Werner inokuudza Chokwadi pamusoro peKudiki kwake Nyaya, Hupenyu hwepakutanga, Vabereki, Nhengo dzemhuri, Musikana, Wife, Vana, Mota, Net Kukosha uye Lifestyle.
Mumashoko akareruka, LifeBogger inokupa kuzara kwakazara kweHupenyu Hwake Hwega, kutanga kubva paakatanga Makore Ekutanga kusvika paakazova Akakurumbira. Mufananidzo wekufambira mberi kwake kubva paudiki kusvika pakuva munhu mukuru zvechokwadi, inotaurira yake Bio Nhau.
Hongu, iwe neni tinoziva wechiGerman mutambi wenhamba, zvinonyanya kukosha, mumwe wevarovi vanokurumidza muEurope vane huwandu hunoshamisa hwezvinangwa pamatanho ese. Kunyangwe hazvo rumbidzo, vashoma chete vateveri venhabvu vakatora nguva yavo kuverenga Timo Werner's Bio. Isu takagadzirira izvo zvako chete uye pasina kumwe kuwedzera, ngatitangei nenyaya yemakore ake ekutanga.
Timo Werner Yevacheche Nyaya:
Yevatangi veBiography, 'Turbo Timo' izita remadunhurirwa reGerman. Timo Werner akaberekwa pazuva re6th raKurume 1996 kuna amai vake, Sabine Werner uye baba, Günther Schuh muguta reStuttgart, kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kweGerman.
Mutambi wenhabvu akazvarwa asina hama kana hanzvadzi, zvichireva kuti ndiye ega mwanakomana akazvarwa kuvabereki vake. Pamwe unofanira kunge wakazvibvunza ... Sei asingatakure zita rababa vake- 'Schuh'. Chokwadi ndechekuti, vabereki vaTimo Werner kunyangwe vakagara pamwe kwenguva refu, vanoita kunge vasina kuroora zviri pamutemo. Neichi chikonzero, Mutambi wenhabvu anotakura zita raamai vake 'Werner'.
Timo Werner Mhuri Yemhuri:
Baba veGerman, Gunter Schuh, vaishanda imba yepakati-kati muStuttgart. Iyo imba iriko kusvika nhasi, inobata tsika dzakakwirira dzekudzidzisa vadiki. Timo Werner anobva mukutanga kuzvininipisa mumusha wake unoshamisa.
Achikura, vabereki vake vakamudzidzisa ina tsika dzakanaka. Zvinosanganisira; (1) kuremekedza vese (2) kuva nerupo / kubatsira (3) kuva nepfungwa yebasa (4) kusambokuvadza chero munhu uye (5) kuumba tsika yekugovana.
Achitaura nezvekurerwa kwake nekuzvininipisa kunoratidza hunhu hwake nhasi, Timo Werner akamboudza vezvenhau veGerman;
Pandinenge ndiine mhuri yangu uye shamwari, handisi Timo Werner mutambi wenhabvu. Ini ndinongova Timo, anozvininipisa mwanakomana uye akavimbika shamwari.
Ichokwadi ndechekuti, ini ndiri mukomana semumwe munhu wese. Kana ndikaita chimwe chinhu chisina kunaka, vabereki vangu neshamwari havasi kutya kundiudza!
Timo Werner Mhuri Kubva:
Isu tese tinoziva kuti iye anowanza wechiGerman Striker, zvisinei, havazi vese vanoziva kwaanobva kuGerman. Mhuri yaTimo Werner yakabva kuStuttgart, guta guru rekumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kweGermanen Baden-Württemberg nyika.
Kana iwe waisaziva, iro guta rine zita remadunhurirwa rekuti "chivako chemotokari". Waizviziva here?… Stuttgart inogara dzimbahwe rePorsche uye wamasimba ose Mercedes-Benz.
Kutanga uye pamberi pezvese, vabereki vaTimo Werner- kunyanya baba vake vanoonekwa saiye mainjiniya ezvakatemerwa. Baba venhabvu vaive mutambi wenhabvu uyo ​​akazove murairidzi. Somukomana mudiki, baba vaTimo Werner, Günther Schuh akamudzidzisa zvinoreva kutsungirira. Mukutanga kwemazuva ake, akabvumidza mwanakomana wake mumwe chete kuti arambe achimhanya achikwira makomo muzita rekuvandudza simba rake uye mutambo.
Semukomana mudiki anozvininipisa akaberekwa zvakanaka, Timo aive nepfungwa yekuda kufadza Baba vake, uyo vazhinji (kunyanya mudzidzi wake) waanoona semurangi ane masimba 'anotyisa' ekudzidzisa.
Kudzoka mumazuva, mushure mekumhanya zuva rese, Timo aibvunza Baba vake mushure memakumbo ose kuti aimhanya zvakadii. Ichiramba ichimhanya ichikwira makomo akaona iyo Mudiki ichikura kwesimba rake rekumhanyisa- iro rave rave rake rezvinhu zvikuru nhasi.
Mario Gomez- Iyo Yehucheche Gamba:
Günther Schuh akatungamira mwanakomana wake pakuva murwisi, chiitiko chakamupa mukana wekutora muenzaniso-mumunhu Mario Gomez, aimbove wechiGerman kumberi. Kare kumashure (asati ave makore ekuyaruka), Timo ainamatira chikwangwani cheGerman Striker pese pemba yake. Sezvineiwo, zvishoma aisaziva kuti ndiye achazosiya gamba rake (Mario Gomez) kubva kuchikwata chenyika cheGerman.
Kukura, pakanga paine chokwadi chechokwadi chekuti nhabvu ichave iri yekufona kwake. Sezvineiwo, baba vake Günther Schuh vakatendera mwanakomana wavo kunyoresa TSV Steinhaldenfeld, kirabhu kwaakarairidza yavo yepamusoro junior timu. Achida kufadza murume iye akatarisa kumusoro kune vakawanda- Baba vake. Mudiki Timo Werner, uyo anoratidzwa pazasi akatanga kubva pasi.
Kukurudzira Kwababa Maitiro:
Zvakare mukuda kumuona achikunda, baba vaTimo vaifanira kushandisa mari kukurudzira senge zano rinodiwa kuona mwanakomana wavo achifambira mberi. Chokwadi ndechekuti, mudiki ainakidzwa zvishoma zvekurudziro kubva kuvabereki vese (zvimwe kuna baba vake) - feat iyo yakazozvisundira zvishoma kuomarara semwana.
Waizviziva here? Gunter Schuh akapa mwanakomana wake mari yekuwedzera muhomwe yechinangwa chimwe nechimwe chaakarova. Achitsanangura maitirwo ezvinhu zvese, Michael Bulling, mukuru wenhabvu kuTSV Steinhaldenfeld akambopa rondedzero yake. Mumashoko ake;
“Baba vaTimo Werner vaive murairidzi wechikwata chevakuru. Anouya kuzotarisa mwanakomana wake ane makore manomwe ekuberekwa achitamba.
Rimwe zuva, akavimbisa Timo mudiki mari shoma yechinangwa chimwe nechimwe. Ndinofunga akapedzisira azvidemba nekukurumidza. ”
Kuna Gunter Schuh, matekiniki ekukurudzira akadaro akapedzisira ave kurovedza muviri kunodhura. Izvi zvaive nekuti mwanakomana wavo wemakore masere (Timo Werner) aityisa. Kudzoka mumazuva, kupfura kwejaya kwaive kwakasimba kwazvo uye hapana aigona kunzwisisa kuti anodonha sei uye anomhanya chaizvo.
Timo Werner Biography Chokwadi- Mugwagwa Unoenda Mukurumbira Nhau:
Ndichiri kuita zvakanaka kukirabhu-inogara nhabvu muStuttgart, Günther Schuh akacherekedza vezvenhau veGerman vachifarira mumwanakomana wavo. Kuti amuite kuti agadzirire ramangwana, Günther Schuh akatora Timo- ZVEI- kukwira gomo- ino nguva, achimuita kuti amhanye kwemaawa pamwe chete nekuwedzera nhabvu tsika. Aiziva zvizere kuti hofori dzemuno VfB Stuttgart vaifarira mwanakomana wavo.
Mushure mekubvunzana kwakawanda, vabereki vaTimo Werner vakabvumirana kuti Rising yavo yeGerman Mwanakomana ajoine timu yemhuri yeguta reMhuri VfB Stuttgart. Ikoko, Little Timo akasimuka nemumapoka echikwata chevechidiki. Kunyangwe iyo kirabhu yaive zvakare Serge Gnabry uye Joshua Kimmich, Timo ndiye ainyanya kutamba mutambi. Vezvenhau veGerman sezvinoonekwa pazasi vanga vatanga kudzingirira wechidiki pazera diki kwazvo.
Paaifamba achikwira kumusoro, baba vaTimo Werner vakaenderera mberi nehunyanzvi hwekukurudzira mwanakomana wavo nezvikurudziro kunyangwe panguva yaakatambira VfB Stuttgart. Panguva ino, mitemo yakagadziriswa uye baba vake vakabvuma kubhadhara chete zvinangwa Timo aizozvinyorera nemusoro wake uye nerutsoka rutsoka.
Mukuda kuita izvi, "Turbo Timo" sezvaaidaidzwa zita rekuti dzimwe nguva aigona kuita matanho akaomarara kuti akwanise kurova nemusoro wake nerutsoka rworuboshwe. Nekufamba kwenguva, izvo zvakave zvakareruka kumudiki, uye akazviona achitora mari yese yababa vake.
Timo Werner Kubudirira Nhau:
Sezvaitarisirwa, hazvina kutora nguva Timo mudiki asati azviona achipfekera baba vake kubudirira, mumwe aive nyanzvi mumutambo wenhabvu. Akarova zvibodzwa zvekunakidzwa padanho rehudiki, wechidiki uyu akakwezva kufarira kubva kuRB Leipzig uyo akamutora musi wa11th yaJune 2016. Kwapera gore, akadaidzwa muchikwata chenyika cheGerman na Joachim Löw- chikuva chaaikwikwidza nekudzinga gamba rake rehudiki- Mario Gomez.
Chokwadi ndechekuti, iro reGerman RB Leipzig basa rakaratidzirwa nekururamisa nhaka yemakore ake ehudiki. Timo Werner akapinda mumwaka wekutanga nekirabhu, achirova ka21 mumitambo 31. With Julian Nagelsmann, chinangwa chake chakasvika pa78- a feat iyo yakakwezva mwenje wakajeka waFrank Lampard weLondon- Chelsea FC.
Senge panguva yekuvandudza iyi Biography, iyo RB Leipzig roketi peturu '(sezita remadunhurirwa nekirabhu) uye mumwe wake mukupara mhosva- Kia Havertz zvakagadzirirwa kuita kuti zita razvo rikurumbira muEngland Pasina mubvunzo, Chelsea Nhabvu Fans vane chokwadi chekuti achabudirira muEngland pasi Frank Lampard. Izvo zvakasara zveBio izvi, sekutaura kwedu, ikozvino nhoroondo.
Timo Werner Rudo Nyaya:
Sezvo chirevo ichi chichienda ... Kunze kweanobudirira nhabvu, panogara paine inonakidza WAG Naizvozvo, tpano hakurambe chokwadi chekuti Werner akanaka mucheche kumeso anotaridzika haikwezve vateveri vechikadzi vangade kuzvidaidza sevasikana, zvigadzirwa zvemukadzi kana amai vemwana wake kana vana.
Nezve Timo Werner Musikana Wemusikana:
Kwenguva yakareba, iye Striker anga achidanana naStuttgart akavakirwa musimboti wemuenzaniso Julia Nagler, kubva pamazuva ake ekutanga ebasa. Timo Werner igore rimwe chete kudarika musikana wake- Julia Nagler. Kufananidzirwa pazasi, aimbove mudzidzi kuYunivhesiti yeStuggart.
Julia Nagler, sekuziva kwevazhinji, munhu anozvipira uyo hapana kana chaanoita kunze kwekupa rutsigiro rwepamoyo kumukomana wake kunyange iwe zvinoreva kuisa hupenyu hwake panjodzi.
Nhabvu dzenhabvu dzinogara dzakakosha kune vaviri vacho sezvo vachiwanzoonekwa mune yavo yavanofarira yezhizha nzira. Chokwadi ndechekuti, rudo rwevaviri ava rwuri kunzi rwuri kusimba shure kwekupenya kwenhau.
Timo Aizoroora Musikana wake here?
Kunyangwe kuve pamwe kwenguva refu, zvinotarisirwa kudivi revateveri kuona vese vadikani vachiroora. Nekudaro, mamiriro azvino mumhuri yaTimo Werner mukana wekusaitika. Takacherekedza pakutanga muBio iyi nezve baba vemutambi wenhabvu naamai vasina kubvuma kusunga knot- asi vachigara vachifara. Izvi zvinogona kunge zviri izvo pakati paTimo Werner nemusikana wake Julia Nagler.
Timo Werner Hupenyu hweMunhu:
Iwe ungangove wakamuziva iye semhondi inouraya, asi unomuziva zvakadii iye pasiti pekutamba? Ichokwadi ndechekuti, Turbo Timo mumwe munhu ane hanya zvakanyanya nezvechiso chake- asingade chero chinhu kunze kwekuveurwa kwakachena. Iye zvakare anokumikidza yakawanda yenguva yake yakasarudzika yebasa rakaderera, hunhu hwakanaka hwaakadzidza kubva kuna amai vake.
Timo Werner's HupenyuStyle:
Pano, isu tichakuudza mashandisiro anoita iye Mberi mari yake. Kure kure nemunda fo kutamba, Timo angangoda kushandisa mari yake achienda kuUnited States kunoona iyo NBA. Sezvinoonekwa pazasi, iye akavimbika fan weLakers.
Timo Werner Mota:
Kune murume weChelsea, kuda kweGerman Autos kunogara kuripo. Hazvishamise kuti guta reGerman reStuttgart- uko kunobva mhuri yaTimo Werner ndiyo imba yemota- Mercedes Benz nePorche. Aimbova RB Leipzig murume anofarira kupfeka machisi epamusoro-shati akakwana nemota yake. Sezvinoonekwa pazasi, yake sarudzo yemota inoramba iri iyo Mercedes Benz. Iye futi wekumhanyisa mota.
Timo Werner's Net Kukosha:
Kuongorora hupfumi hwake, isu tinotanga tarisa pane izvo zvaanowana neChelsea. Timo Werner muhoro wepagore kuChelsea ungangoita £ 9,009,840.
Mari kubva pamubhadharo, kushambadza uye madhiri ekutsigira angangoramba akawanda kunyangwe zvikwereti zvake kubva kune zvake zvinhu zvabviswa. Nezve izvo, isu tinogona kufungidzira Timo Werner mambure akakosha kuve pamadhora 29 miriyoni.
Timo Werner Hupenyu Hwemhuri:
Sezvinowanzo taurwa, simba reimba, sesimba reuto, riri mukuvimbika kwayo kune mumwe nemumwe. Iyi ndiyo nhovo yakavakirwa mhuri yaTimo Werner. Ichi chikamu cheBio yedu chinokuudza iwe zvakawanda nezvevabereki vake uye dzimwe nhengo dzenzara yake.
Nezve Amai vaTimo Werner:
Chinhu chekutanga kucherechedza nezvaSabrine Werner, amai veGerman inyaya yekuti zita rake rinoenderana zvakakwana nemwanakomana wake Timo. Amai vaWerner vanowanzo gamuchira kiredhiti yebasa ravo mukuona kuti mwanakomana wavo apedza fundo yake.
Maererano ne Bundesliga, Timo akapedza chikoro chake chepamusoro achitenda Sabine Werner, amai vake vaida kuti mwanakomana wavo ave neiyo shoma yeChikoro chepamusoro asati ave mutambi wenhabvu. Kutenda kutarisira kwake, Timo kumashure panguva iyoyo kuchikoro aive mwana akajairika asi asiri mudzidzi akagomara. Iwe wakarasikirwa nehafu yenguva yake yechikoro nekuda kwekuzvipira kwebhola. Basa raamai vake rakabhadharwa sezvo aikwanisa kupedza mu2014 pazera re17 (semutambi weBundesliga).
Nezve Baba vaTimo Werner:
Sezvambotaurwa, Günther shangu, mutambi wenhabvu uyo ​​akazove murairidzi anopfuura baba kuna Geman. Achiona kurarama zviroto zvake zvekuve pro, baba varombo vakapinda mukurairidza vaine chinangwa chekuita kuti mwanakomana wavo aenderere kwaakasiya. Nekutenda, Timo Werner parizvino anorarama hope dzababa vake.
Nezve Timo Werner's Siblings:
Mushure mekutsvagisisa, isu tinoona kuti Mutambi wenhabvu ndiye ega mwana akazvarwa kuvabereki vake- asina mukoma kana hanzvadzi.
Timo Werner Untold Chokwadi:
Chokwadi # 1: Kuparadzaniswa kweMihoro uye Kuenzanisa kune Avhareji yeBritish:
Heino ongororo yezvinowanikwa naTimo Werner nekungokamba bhora kutenderera nemunda.
Kwegore £ 9,009,840 € 10,043,989 $11,865,779
Pamwedzi £ 750,820 € 836,999 $988,815
Pa Vhiki £ 173,000 € 192,857 $227,836
Pazuva £ 24,714 € 27,551 $32,548
Pa Awa £ 1,030 € 1,148 $1,356
PaMiniti £ 17 € 19 $22.6
Kwechipiri £ 0.28 € 0.32 $0.37
Izvi ndizvo zvakaitwa naTimo Werner akawana kubva pawakatanga kuona peji ino.
Ivhareji yeBritish inowana £ 29,009 pagore ingangoda kushanda kwemakore makumi maviri nemashanu nemwedzi minomwe kuti uwane Timo Werner Mubhadharo wegore kuChelsea.
Chokwadi # 2: Speed ​​Facts:
Timo Werner akambovhara masekondi 11.11 mushure mekumhanya zana metres nebhola. Izvi zvakaitika mukati megore rake rekupedzisira kuchikoro. Neichi chikonzero, iye akatumidzwa zita remadunhurirwa rekuti 'Turbo Timo' nemaGerman midhiya zvese nekuda kweiyo blistering nhanho.
Chokwadi # 3: FIFA Gamers 'Sarudzo yeMabasa Maitiro:
Kumhanyisa kwenhabvu kwakabatanidzwa uye kupenya kwehunyanzvi ndiyo yake huru yekutengesa poindi uyezve paFIFA.
Chokwadi # 4: Anovenga Ruzha:
Around 2017, mudiki akambove nekufema uye nemhepo kutenderera dambudziko rakakonzerwa neruzha rwevanopikisa vateveri.
Mamiriro ehutsinye muTurkey akasiya Timo isina kugadzikana. Mukupindura, iye Striker akaita shuwa nekunamira minwe yake kune nzeve mbiri mune imwe kudzivisa kurira. Izvo hazvina kushanda akabva apihwa earplugs. Mushure memaminetsi makumi matatu nemasere, Timo akazviona abva pamutambo.
Chokwadi # 4: Pane imwe nguva Manchester United Fan:
Senge panguva yekunyora Bio yake, Timo Werner anotambira Chelsea FC. Chokwadi ndechekuti, aimbofarira United, kirabhu yaaizoda kutamba nekuda kwenhoroondo yavo.
Chokwadi # 5: Chitendero chaTimo Werner:
Kutonga nezita rake rekutanga, unogona kufungidzira zviri nyore kuti muKristu nekuzvarwa. Timo izita remukomana rinoreva "kukudzwa kwaMwari". Mutaundi rekumusha kunobva mhuri yaTimo Werner, vanopfuura 50% yevagari maKristu vane vazhinji vari vaKaturike. Nekudaro, pane shanduko yakakwira chinamato cheMutambi wenhabvu chiKristu.
Zita rizere: Timo Werner.
Zuva rekuzvarwa: 6th zuva raKurume 1996.
Guta rekumusha. Stuttgart, Jerimani.
Vabereki: Baba (Günther Schuh), Amai (Sabine Werner).
Vabereki Mamiriro Ewanano: Vasina kuroora (sepana 2020)
Vanun'una: Kwete Mukoma nasisi.
Kureba mu Tsoka: 5 tsoka 11 inches kureba.
Dzidzo: TSV Steinhaldenfeld uye Stuttgart High Chikoro.
Muhoro kuChelsea: £ 9,009,840 pagore.
Net Worth: $ 29 mamiriyoni.
Timo Werner's Biography inotidzidzisa kuti titende kuti kuva nekusagadzikana uye kutsunga ndiwo musimboti webudiriro. Zvakare, kuve mubereki anotsigira - senge nzira dzake kuva nezvakanakira mwana wako pamoyo. Vabereki vaTimo Werner- Günther Schuh naSabrine Werner vave vachibatsira pakuona mwanakomana wavo achizadzisa zviroto zvake sezvinoonekwa muBio yake. Nomutsa tizivise zvaunofunga nezvechinyorwa chedu kana Mutambi wenhabvu muchikamu chekutaura.
RB Leipzig Nhau dzeBhora
Yakagadziridzwa zuva: Gunyana 20, 2020